UMHLATHUZE WETHULE UHLELO LOKUDLA KWABASWELE – Sivubela intuthuko Newspaper
IMeya yomasipala uMhlathuze ngenkathi bethula uhlelo lwamaphasela okudla
UMASIPALA uMhlathuze enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal wethule ngokusemthethweni uhlelo lwenqolobane (Food Banks) oluzosiza kakhulu leyo mindeni ehlwempu ngalesikhathi sikathaqa (Lockdown) njengoba kunegciwane iCovid-19.
Lokudla kubhekeke ukuthi kusize kakhulu umphakathi owakhele lomasipala njengoba kunezigaba ezimbili kuzosizakala labo abasuka kwabathathu kuya kwabahlanu, kuphinde kusuke kwabahlanu kuya ngaphezulu.
“Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukunciphisa ubunzima obulethwa igciwane iCorona Virus emphakathini wethu ikakhulukazi leyo mindeni ehlwempu. Sinxusa bonke labo abangakwazi ukunikela benze njalo, kungakhathaleki ukuthi kuncane noma kukhulu siyakwamukela.Siyafisa ukuthi kube ukudla okungasheshi ukunakala okuhlala isikhathi eside. Le nqolobane ngeke iyamukele imineko yemali kunalokho sizobanika ulwazi ngokudla esikudingayo ,” kusho Mhlongo.
Lokhu kwethulwa kwalolu hlelo luzohambisana nokuhlonzwa kwalabo abaswele abazohlomula, nokuzokwenziwa ngendlela ecacile , engenayo inkohlakalo, njengoba konke ukudla okunikelelwe ngakho kuzolotshwa emabhukwini.
UMhlongo unxuse zonke izinhlaka ezahlukene okuhlanganisa nezinhlangano ezingenzinzuzo ukuba ziphonse esivivaneni ukuze kushintshe izimpilo zomphakathi.
“Sithanda ukwazisa umphakathi ukuthi lolu hlelo luzokwenziwa ngendlela ecacile, engenayo inkohlakalo nokwenzelela, nokubhekelelwa kwezihlobo kodwa kuzohlomula labo abafanele kuphele. Lokhu kuzokwenziwa ngendlela yokuhlonza ekhuthazwe iminyango kahulumeni okuDSD, SASSA, COGTA okuwuhlelo abalusebenzisayo. Kuziphinde kube nohla okuzosayinwa yilabo abahlomulile,” kusho Mhlongo.
Lo masipala unxusa zonke izinhlaka ezahlukene ukuba ziphonse esivivaneni ukuze kusizakale umphakathi.